Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Eswatini Travel News • Raharaham-panjakana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Olona manao vaovao • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Ny fifandraisana manokana misy eo amin'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany sy ny fanjakan'ny Eswatini
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina sy ny fanjakan'ny Eswatini dia nametraka fiaraha-miasa mandresy manokana hatramin'ny nanombohan'ny ATB tao amin'ny World Travel Market any Cape Town tamin'ny taona 2019.
Ny filohan'ny birao afrikanina fizahantany Cuthbert Ncube dia ao amin'ny fanjakana anio ary nandray azy tamim-pitiavana tokoa ny Hon. Min Moses Vilakati, ary ny CEO CEO Eswatini Tourism Authority ary Linda Nxumalo, ny Chief Executive Officer (CEO) an'ny Eswatini Tourism Authority.
Ny Hon. Ny minisitra M. Vilaki avy amin'ny fanjakan'ny Eswatini, izay mitarika ny fizahantany sy ny tontolo iainana, dia natolotry ny filoha mpanatanteraka ny fizahantany afrikanina Atoa Cuthbert Ncube.
Ny fitsidihana ofisialin'ny ATB Chair dia nanamafy ny fifandraisana manokana nananan'ny Birao Fizahan-tany Afrikanina tamin'i Eswatini.
Eswatini dia niditra ho mpikambana tao amin'ny Birao Fizahan-tany Afrikanina tamin'ny nahaterahan'ny fikambanana ofisialy tamin'ny taona 2019 tao amin'ny World Travel Market any Cape Town.
Ny Hon. Ny minisitry ny Eswatini, Moses Vilikati, dia nandravaka an'Andriamatoa Mcube tamin'ny mariky ny fanjakana.
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina sy ny fanjakan'ny Eswatini dia nametraka fiaraha-miasa mandresy manokana hatramin'ny nanombohan'ny ATB tao amin'ny World Travel Market any Cape Town tamin'ny taona 2019. Ny filohan'ny birao fizahan-tany afrikanina Cuthbert Ncube dia ao amin'ny Fanjakana anio ary nahazo fandraisana tsara avy amin'ny Hon. Ny minisitra Moses Vilakati, ny CEO CEO Eswatini Authority, ary avy amin'i Linda Nxumalo, ny Chief Executive Officer (CEO) an'ny Eswatini Tourism Authority.
Ny mpanatanteraka ATB sady minisitry ny fizahantany taloha ho an'ny Zimbabwe, Dr. Walter Mzembi, dia naneho hevitra hoe: “Asa tsara, Andriamatoa Filoha. Ny Fanjakan'i Eswatini dia mpanohana matanjaka an'ny ATB. Bravo ho an'ny Minisitra Vilakati sy ny ekipa amin'ny fandraisana tsara.
Eswatini, ny fanjakan'ny Eswatini amin'ny fomba ofisialy ary indraindray soratana amin'ny teny Anglisy hoe eSwatini, dia fantatra amin'ny anarana hoe Swaziland amin'ny teny anglisy. Izy io dia firenena tsy misy tanety any Afrika atsimo ary i Mozambika dia manamorona ny sisiny avaratra atsinanana ary i Afrika atsimo dia eo avaratra sy andrefana ary atsimo.
Ny Fanjakan'i Eswatini dia toerana manokana eto amin'izao tontolo izao. Ny iray amin'ireo firenena vitsivitsy eto amin'izao tontolo izao manana mpanjaka tsy refesi-mandidy, ny Majesty the King, Mswai III, dia mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany sy ny kolontsaina ho an'ny fireneny sy ny olom-peheziny. Heveriny ho laharam-pahamehana amin'ny fizahana ara-toekarena ny valanaretina COVID-19.
Firenena kely manana fo lehibe sy olona sariaka mafana dia milazalaza tsara an'i Eswatini (Swaziland) - firenena iray amin'ireo mpanjaka vitsy sisa tavela any Afrika ary mandray sy manohana ny fomban-drazana tsy manam-paharoa sy taloha. Samy mitazona sy mitahiry lova ara-kolontsaina mahatalanjona izay mety tsy hitoviana na aiza na aiza atsy Afrika ny mpanjaka sy ny mponina any Eswatini. Ny mpitsidika dia afaka mahazo hevitra tsara kokoa momba ny kolotsaina Afrikana nentin-drazana eto fa tsy ny toerana hafa rehetra amin'ny faritra, sy izay hita, ao anatin'izany ny mahavariana fety, tsy natsangana tamin'ny maty noho ny dolara mpizahatany fa tena izy.
Ilay malaza Umhlanga (Dance Reed) ary Incwala dia fombafomba nentin-drazana izay misy olona Swazi an'aliny ary mahasarika mpitsidika erak'izao tontolo izao. Fa ny akanjo, lanonana ary fandihizana nentim-paharazana dia hita manerana ny firenena amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona.
Ny vahoaka Swazi dia olona miavonavona sy sariaka be. Mandray ny mpitsidika amin'ny tsiky mahafinaritra izy ireo ary faly amin'ny fampisehoana ny fireneny mahafinaritra. Ary koa maromaro fandraisana andraikitra ataon'ny mpiara-monina, ireo mpitsidika dia afaka miaina fiainana isan'andro any Eswatini amin'ny fiantsoana ao amin'ny a tokantrano na vohitra eo an-toerana izay andraisana azy ireo tsara. Raha tsy izany, Mantenga Cultural Village dia fanarenana miasa tsara amin'ny tokantrano nentim-paharazana tamin'ny taona 1850 tany ho any, izay manome traikefa amin'ny fahasarotana sy ny nuansa rehetra amin'ny fiainana nentim-paharazana Swati, ary koa fampisehoana dihy goavana ataon'ny vondrona iray izay mitety an'izao tontolo izao.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Birao Afrikana momba ny fizahantany: www.africantourismboard.com